Qurxinta haanta kaluunka | Kalluunka
Qurxinta dhulku waa hab lagu qurxiyo oo u qaybi meelaha ku jira haamaha kalluunka. Waa nooc ka mid ah qurxinta oo aan ku go'aansan karno cunsur kasta oo aan dooneyno inaan ku dhigno haanta kalluunkeenna, ha noqdaan kuwo siman, dhagaxyo, qolof ama faahfaahin kale.
Meeshaan waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fiican u ogaato waxa dunidan dhul-dhismeedka ay ka kooban tahay gudaha kalluunka dhexdiisa, oo inkasta oo ay u muuqato mid aan khaldanayn magaciisa, haddana laga maqli karo meesha. Laakiin waa anshax in guryo aad u waaweyn ama guryo aan ku haysan karno haamo waaweyn oo kalluun ah ay waxtar weyn yeelan karto.
Macluumaad yar ma dhaawaceyso, sidaa darteed ku raaxee booska oo ha ilaawin inay had iyo jeer wanaagsan tahay in si fiican loo ogaado waxyaabaha iyo mowduucyada na xiiseynaya.
Haddii aad leedahay beer oo aad leedahay meel balli biyo ah, hubaal waxaad doorbidi laheyd kalluunka halkaas in ka badan kan ...
Waa maxay aquarium biyotope?
Aquarium biotope waa midka aan ku abuureyno nidaam deegaan si kalluunka iyo dhirtuba u koraan oo ...
Taxaddarrada markaad qurxinayso quraaradda
Markaad qurxinayso oo ay ku jiraan walxaha ka mid noqon doona deegaanka aquarium waa inaan dalbanaa ...
Sida loo qurxiyo quraaraddaada
by Encarni samee 10 sano .
Markaad qurxinayso quraaradda, waa shakhsiyadda mid kasta oo ka mid ah oo saameyn ku leh maxaa yeelay ...